Raw Trenbolone Enanthate poda Vagadziri & Vanotengesa - Fakita
Trenbolone E (Trenbolone enanthate) ndeimwe ye steroid iyo inogona kuve yakarongerwa seyakanyanyisa kuwedzera iyo inowedzera kumusasa wemasumbu. kudiwa kwahwo pakati pevarimi vomuviri kwakakura kupfuura kwemakore nekuda kwekubudirira kwayo mumusimba kukura.Zvino E (Trenbolone enanthate) ndiyo yakareba kwenguva yakareba yakawanda ye trenbolone uye ine nguva yakareba yekuwedzerwa. Iine hafu yehupenyu hwemazuva gumi nembiri inobatsira kune nguva yakareba anabolic action.
Raw Trenbolone Enanthate powder (10161-35-8) Tsanangudzo
Raw Trenbolone Enanthate powder, inozivikanwa nezita rezita rokuti Trenabol, inogadzirwa uye injected anabolic-androgenic steroid (AAS) uye yakabva nandrolone yakanga isati yatengeswa. Ndiyo C17β enanthate ester uye nguva refu inoshandisa prodrug ye trenbolone. Raw Trenbolone Enanthate powder yakanga isati yatenderwa kuchipatara kana kushandisa zvigadzirwa zvemhuka asi inoshandiswa mukutsvakurudza kwesayenzi uye yakatengeswa paInternet black market semuumbi we steroid wevarimi vemasvingo nevatambi.
Vatambi uye miviri yakave yakashandisa Raw Trenbolone Enanthate powder semuviri-uye kushanda-kukurudzira mishonga kwemakumi emakore. Kune huwandu huzhinji hwezvibatsiro semuiti wekushandisa kuburikidza uchishandisa Raw Trenbolone Enanthate powder seAAS, nokuti inofungidzirwa kuti inenge kashanu pane inoshanda uye yakasimba kudarika testosterone. Kusiyana ne testosterone, Trenbolone Enanthate powder haina kukonzera chero kushanduka kwemvura panguva yekuwana musimba mashoma. Izvi zvinobvumira kuti vashandi vemuviri vaoneke vakachena, uye ichi ndicho chikonzero chichinyanya kushandiswa pavanenge vachigadzirira zviitiko zvekukwikwidzana.
Kemikari Name Trenbolone Enanthate; UNII-FF02TM6THR; FF02TM6THR; 1629618-98-9; Trenbolone Enantate; SCHEMBL634216
muchiso Name Trenabol
Molecular Wsere 382.544
Kunyorera Point 72-78 ° C
APane Raw Trenbolone Enanthate powder ndeimwe yevana anabolic steroid ine simba ine simba rinokurudzira kukwanisa kunyanya kuvarwi uye vavaki vomuviri. Trenbolone Enanthate powder inobudirira kupfuura testosterone kana yakashandiswa zvakanaka uye maererano nezvinorumbidzwa.
Chii chakakonzerwa neTrenbolone Enanthate powder (10161-35-8)?
Trenbolone Enanthate powder inonyanya anabolic androgenic steroid, ine nguva 500 yakawanda anabolic uye androgenic steroid kupfuura testosterone. Trenbolone makungu ane Trenbolone hormone yakabatanidzwa kune ester (Enanthate), iyo inobatsira kudzora basa rekubudisa-hormone. Trenbolone Enathate powder inonyanya kushandiswa pakugadzira muviri, kusanganisira kudzvora uye kubvongodza. Mune mararamiro, haawanzoshandisirwe kuhutano hwe hypogonadism, hypogonadotropic hypogonadism, uye kunonoka kuberekwa pakati pevarume, asi kune vakadzi, inoshandiswa kurapa kenza yemamastatic mastra. Trenbolone Enanthate powder inoshandiswawo sechirwere chezvokurapa mumhuka kuti chiwedzere musimba kukura uye chido.
Iyo Yakakura Trenbolone Enanthate Powder (10161-35-8) mabasa
Nemhaka yokuti Trenbolone Enanthate powder inoratidza hafu yeupenyu hwemazuva ane 7 - 10 uye ikozvino inowanzoonekwa kupfuura imwe imwe yakareba yechirungu chePerabolan, inopa vashandi vakawanda avo vanonyanya kusina nyanya kana kuti vanowana majojo anowanzosvibiswa nehuwandu hwakanaka Trenbolone kushandisa. Kusiyana neTrenbolone Acetate powder, iyo inoda kuti rimwe zuva rimwe majekesiti zvishoma, Trenbolone Enanthate powder inoda kutungamirirwa kaviri pavhiki nejeri rimwe nerimwe rinoparadzaniswa zvakasiyana (Muvhuro neChishanu, somuenzaniso). Nemhaka yokuti Trenbolone inonzi inonzi yakadzika-yakakura yevana anabolic steroid, ruzhinji rwevashandisi vesimbi iyi kakawanda inonyatsoziva ins and outs it. Vakawanda vari pakati pavanoita danho ravo rekutanga kune Trenbolone vachasarudza Trenbolone Enanthate powder nekuda kwekushandiswa kwemajeri mashoma. Zvisinei, kusagadzikana kune izvi ndechokuti Trenbolone inonzi steroid anabolic iyo ine simba kwazvo uye inotakura nayo zvimwe zvingava nemigumisiro isingaoneki nemamwe mishonga. Saka rakanyorwa se'kutsamwa 'anabolic steroid, uye vatangi veTrenbolone vari kushamisika kuti maitiro api angashandisa angada kusarudza Trenbolone Acetate pane. Ichi chikonzero chiri chokuti hafu yehupenyu hweTrenbolone Acetate powder inoita kuti ropa reTrenbolone rikurumidze kukurumidza uye rinokurumidza kukurumidza, kuve nekugadziriswa kwekurumidza kubva mumuviri kana chero nyaya dzichimuka uye munhu anoshandisa kumira. NeTrenbolone Enanthate powder, mavhiki maviri ndizvo zvinotarisirwa Trenbolone isati yanyatsojeka yemuviri, panguva iyo nguva isingadi migumisiro yakashata inogona kuramba iripo.
Saka ndiyo inofanirwa nemunhu kushandisa sarudzo iyi uye kuzvisarudzira pachako kana kushandiswa kwemajoini mashoma kunowanikwa zvakakosha dambudziko rekumirira kwevhiki mbiri mishonga isati yabva kubva mumuviri kana mimwe miitiro isina kunaka inosvika. Kana mushumiri ari mutinhidzi ane ruzivo rweTrenbolone uyo atoziva kutendeuka kwemuviri wavo, chisarudzo ichi chinofanira kutanga chaitwa.
Trenbolone enanthate inowanzoshandiswa seiri injected mafuta. Nhamba yakawanda yeboka racho ndeye 75 ku 100 mg. Kazhinji Tora kaviri pavhiki. Nguva yakakodzera yekushandisa ndeyemasvondo e8.
Inokurudzira Nitrogen Retention
Nitrogen yakachengetwa mukati memisungo inochengetedza anabolism kuenda uye catabolism pakare. Izvo zvaunogona kuchengetedza zviri nani uye ichi ndicho chimwe chinhu chinokonzera trenbolone enanthate powder - iyo inonakidza nitrogen kuti igare yakasungwa mumusungo.
Inowedzera Protein Synthesis
Trenbolone enanthate powder inokanganisa gasi uye inokanda mapuroteni kuva muwarp speed. Kwete chete inokurudzira musimba kukura, asi inodzivirira zvakare iyo inokosha yekucheka uye kupedza basa.
Kunyangwe ichi ichi chimwe chinhu chinokonzerwa nefutbolone enanthate powder haina kuratidza kuti ichiri kukoshesa kutaurwa. Hakuchina maitiro esrogenic zvinoreva kuti zero kuvaka mvura mumuviri uye kubudirira kwechokwadi.
Masero matsvuku eropa ndivo vatengesi vemhepo yakapoteredza muviri. Iyo inopera pasina kutaura, yakakwirira sero inowedzera oksijeni yakawanda iwe uchange uchinge uchinge uchinge uri kumativi ose mumuviri.
Inowedzera Simba Nesimba
Chimwe chezvinhu zvinonyanya kukosha trenbolone enanthate powder zvine kodzero yekuzvirumbidza pamusoro payo ndiko kukwanisa kukusimbisa iwe uye kukupa simba rose rinokosha - nokukurumidza!
Heino mhedziso yezvinobudirira chero ani zvake mukugadzira muviri anogona kukohwa kubva kuTrenbolone enanthate powder:
Mwoyo wakaoma uye wakaonda mutsva
Kuderedza nguva yekudzorera
Kuwedzera mafuta kunopisa
Kuderedza muhutano hwemuviri
Zvakanaka nokuda kwekugadzirisa maitiro
Shandisa Trenbolone Enanthatepowder kubva kuBuasas.com